Indlela Yokukhetha I-Laptop Elihle Ngezidingo Zakho
Ukuthenga Iziqondiso Amakhompyutha namathebulethi
Izinyathelo zokuqala zokunquma ukuthi iyiphi i-laptop yokuthenga
Ukunquma ukuthi yikuphi i-laptop okuzoyithenga kungaba nzima, ngamakhulu ama- laptop amamodeli angakhetha kuzo kanye namanani avela ngaphansi kwe $ 200 yama-Chromebook angaphezulu kwama-$ 2,000 kuma-laptops aphezulu. Ngaphandle kwesabelomali sakho, uhlobo lomsebenzi futhi udlale uhlela ukwenza kwikhompyutha yakho kufanele kukusize unciphise ukukhetha kwakho. Nazi amathiphu okwenza ukuthengwa kwe-laptop okuhlakaniphile.
1. Cabanga ngesistimu yakho yokusebenza. Unezinketho eziningi nge-Windows laptops, kodwa i-Apple MacBook Pro ne-MacBook Air laptops ingabuye isebenze iWindows, eyenza lawa ma-laptops akhangele ukuhambisana kwawo. Nokho, i-laptops ye-Apple iyinzuzo enkulu. Uma ucabangela le mpikiswano endala phakathi kwe-Mac noma i-laptop ye-PC, cabanga ukuthi ufuna ukuchitha ngempela (bheka ngezansi) nokuthi ngabe udinga i-laptop ngezici (Blu-ray, isikrini sokuthinta, amathrekhi we-TV, njll) ayitholakali ezinhlobonhlobo ezimbalwa zokunikezwa kwe-Apple.
Qala ngesabelomali sakho.
I-Netbooks yindlela ephansi kakhulu futhi encane kunazo zonke zekhompyutha ephathekayo, futhi empeleni ungayisebenzisa ibhizinisi , kodwa inikwe amandla futhi inqunyelwe kakhulu. Baphinde bathathe isikhundla samathebhulethi nama-laptops anamandla kakhulu ahluleka usayizi nesisindo.
Ungathenga i-laptop yebhajethi , enhle emisebenzini eminingi eyisisekelo njengokuphequlula iwebhu nokucubungula amagama, ngaphansi kuka-$ 500 (ngisho nokuncane kakhulu ngesikhathi samaholidi okudayiswa njenge-Black Friday no-Cyber ​​ngoMsombuluko); la ma-laptops ngezinye izikhathi asebenzisa ama-processor asebekhulile futhi ngokuvamile afika esilinganisweni esingu-15.6 "sokubonisa. Ngokujwayelekile, omncane futhi omncane ofuna i-laptop yakho ibe yikho, kuyodingeka uhlawule ngaphezulu.
Uma unezinkulungwane ezimbalwa ozisebenzisayo (phakathi kuka- $ 600 no-$ 1000), ungathenga i-laptop encane-futhi-elula (amamitha angu-4 kuya kwangu-6 namasentimitha angu-14 kuya kuma-intshi angu-16 intshi), ngokusebenza kangcono: isizukulwane esisha abacubungula, i-hard drive enkulu ye-500 GB noma ngaphezulu, nememori eningi. I-T-and-lights cishe yimihlobo ejwayelekile kunazo zonke ze-laptops ezithengiswayo (futhi zathengwa) namhlanje.
Ukuze uthole imali engu- $ 1,000 noma ngaphezulu, ungakhetha noma iyiphi i-laptop ephathekayo ye-ultraportable - isisindo sokukhanya, futhi sincane kakhulu, esinama-screen amasentimitha angu-13 noma ngaphansi-noma uya kwenye indlela, futhi uthenge i-laptop yezokudlala noma i-laptop- -yisisindo esinamandla nesiskrini esikhulu samasentimitha angu-17.
Funda kabanzi mayelana nezinhlobo zekhompuyutha .
3. Yenza uhlu lokubheka lokho okubaluleke kakhulu kuwe kukhompyutha yakho elandelayo. Cabanga ukuthi ufuna ukusebenzisa i-laptop yakho ukuze ubeke izici okufanele uzibheke kukhompyutha yakho elandelayo :
Ukuzijabulisa, njengomculo nama-movie? Hamba ngobukhulu beskrini, ama-intshi angu-15 noma ngaphezulu , nesinqumo esiphezulu, izibonisi eziphezulu (1920x1800 pixels). Kungenzeka futhi ufuna ukuthi kube nzima kakhulu idrayivu yedrayivu kunoma yisiphi isitoreji sakho semidiya, isib., Izinkomba ezinamandla ze-750GB noma ngaphezulu. Umdlali we-Blu-Ray cishe uzobe ohlwini lwakho lokubukwa kwe-movie, kanye nama-HDMI amarekhodi kanye / noma ukusakaza kwe-TV okungenantambo.
Ukuhamba noma okuningi umsebenzi weselula? Ukubonakala kahle kuyoba ukucabangela kwakho okukhulu. Bheka ubukhulu beskrini amasentimitha angu-13 noma ngaphansi, ububanzi obuyizinhlamvu ezingu-4 noma ngaphansi, nokuphila kwebhethri okulinganiselwe kwamahora angu-6 noma ngaphezulu. Ungase futhi ufune ikhadi le- broadband yeselula ku- laptop yakho ukuze ufinyelele i-inthanethi ekuhambeni.
Umsebenzi omningi we-graphic / multimedia noma imidlalo? Isikrini esikhulu, esiphezulu-ncazelo, iningi lememori (4GB iphansi, i-8 GB ingcono), nekhadi lehluzo levidyo levidiyo kufanele libe phezulu ohlwini lwakho lokuhlola. Ukuze usebenze kahle, bheka ama-pro-core processors.
Ukuze uthole ukulinganisela kokusebenza nokukhwabanisa , funa ikhompuyutha encane noma elula noma i-ultraportable nge-display ye-13- noma engu-14 intshi, inqubo yephakathi (u-Intel Core i5 pro processor), i- 4GB noma ngaphezulu kwe-RAM , ne-500GB noma ngaphezulu kwesikhala sedrayivu (noma, ukwenza ngcono, ukushayela isimo esiqinile ).
4. Funda izibuyekezo. Uma usukhona uhlu lwakho lokuhlola, yisikhathi sokuthola ama-laptops afana nalo mthethosivivinywa. Hlola ukubuyekezwa kwamasayithi we-roundup njengoSebenzisa abathengi ukuze ubone ama-laptops anconyiwe kakhulu, bese uqhathanisa izici kuhlu lwakho lokuhlola. Khumbula ukuthi abakhiqizi abaningi be-laptop, njenge-Dell ne-HP, futhi bakuvumela ukuthi ulungiselele i-laptops kumininingwane yakho - ukulungisa inani le-RAM noma ukukhetha i-hard drive ehlukile, isibonelo.
5. Qhathanisa i-laptops. Ekugcineni, ngithanda ukwenza itafula ngokuqhathanisa izinketho ezimbalwa eziphezulu. Ungasebenzisa ispredishithi bese ubhala ama-specs (iprosesa, inkumbulo, i- hard drive , i- graph card , njll) kanye nentengo yekhompuyutha ngayinye ukwenza ukhetho lwakho lokugcina. Leli shidi eliphathekayo le-laptop lingakusiza ukuba unciphise izinketho, ngokuhlunga i-laptops etholakalayo ngama-specs abo.
Ngaphambi kokuthenga, qinisekisa nokuthi usebenzise ngokunakekelwa imali yakho ye-laptop.
I-Kindle Fire HDX Vs. I-iPad Mini 2 Vs. I-Google Nexus 7
Qhathanisa Njalo I-iPad Model Yonke Yenziwe
Izinto ezingu-14 i-iPad Ingcono kune-Android
I-7 Best MacBook Covers Yokuthenga ngo-2017
Ingabe Kufanele Uthuthuke ku-iPad Mini 4?
Ingabe Kufanele Uthuthuke ku-iPad Air 2?
I-7 Best Ergonomic Keyboards Yokuthenga ngo-2018
Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo
Umehluko Phakathi kwe-4G ne-WiFi iPad
I-Dolby Atmos - Kusukela ku-Cinema To Your Home Theater
Ukugcina nokukhumbula amaphasiwedi ngokuphepha
I-MineCon 2016 yamenyezelwa!
Kanjani i-Nintendo 3DS Project 3D Izithombe?
Ingabe Bewazi ukuthi Ungabhalisa ukuze ulandele i-Prime For Free?
Ukubhala i-HTML Code ku-Dreamweaver
Ingabe i-Minecraft izoke iphelelwe yisikhathi?
Iyiphi Ithuluzi Enhle Yokucindezela I-Linux?
Iyini ifayela le-DAA?
Idlalwa kanjani umculo wakho nge-Siri
Ulungele iNdunankulu? Ukubuyekezwa kwe-Apple TV (2015)
Dlala izithombe ze-Sound and PowerPoint ngesikhathi esifanayo
Ukubukeka kwi-Tivo Roamio Over-The-Air Tuner DVR Combo
Ukubala Zonke Izinhlobo Zedatha nge-COUNTA ku-Excel
I-Grand Theft Auto Hot Hot Coffee Mod - I-Mini Mini-Game
Ingabe Ngidinga Ukukwazi Ukudweba I-3D Modeling?
Yenza - I-Linux Command - Unix Command
Lapho i-VHS ifinyelela incazelo ephakeme
Ukuthola i-Windows 7 ne-Mac OS X ukuze udlale ndawonye
Kuyini i-LMGTFY futhi Kungani Kufanele Uyisebenzise?
Isiqondiso sokuhlola nokusebenzisa amakhadi e-SD